Imigomo Yokusebenzisa - InstaZOOM
Ikhaya » Imigomo yokusetshenziswa
Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuthi uyavumelana nale migomo nemibandela. Sicela uzifunde ngokucophelela futhi uqiniseke ukuthi unamathela kuzo.
2. Ukukopisha okokusebenza okune-copyright akuvunyelwe.
3. Akuvunyelwe ukudlula instazoom.mobi sabalalisa amafayela alandiwe.
4. Nguwe kuphela onelungelo lokuwasebenzisa ngokwezinjongo zomuntu siqu.
5. Asirekhodi ukuthi kwenzekani kumaseva ethu.
6. Asiwagcini amafayela kumaseva ethu unomphela.
7. Izicelo zokulandwa zenziwa ngabasebenzisi ngokwabo, njengaku-DMCA (Digital Millennium Copyright Act) kuchazwe.
Imigomo Yokusebenzisa Egcwele:
Uma instazoom.mobi sebenzisa noma vula instazoom.mobi ukufinyelela, uyavumelana nemibandela yokusebenzisa instazoom.mobi njengoba kushiwo kulo mbhalo. Awugunyaziwe instazoom.mobi noma ukusebenzisa izinsiza zayo uma ungayamukeli le migomo.
Uyavuma ukuthi inkampani ingakuthumela izibuyekezo zale migomo yokusebenzisa noma nini ngaphandle kokunikeza izizathu. Futhi uyavuma ukuboshwa izinguquko zesikhathi esizayo kule Migomo Yokusebenzisa ngokushesha nje lapho isithunyelwe kuwebhusayithi.
Uma ungavumelani neyodwa yale migomo yokusebenzisa, imvume yakho izophelelwa yisikhathi ngokuzenzakalelayo uma wephula okukodwa kwezinhlinzeko. Ngokubona kwe instazoom.mobi le layisensi ingaqedwa nganoma yisiphi isikhathi ngaphandle kokunikeza izizathu.
Leli khasi ligcine ukubuyekezwa ngoJanuwari 1, 2014.
Ukusetshenziswa kwamafayela welogi
Asirekhodi noma yimaphi amakheli e-IP noma idatha yomsebenzisi evela kubavakashi bethu. Sisebenzisa i-Google Analytics ukubona ukuthi bangaki abantu abavakashela iwebhusayithi yethu. http://www.google.com/analytics/tos.html
Sisebenzisa izinsiza zokukhangisa zezinkampani zangaphandle ukukhangisa instazoom.mobi Ukuveza izikhangiso. Ezinye izinsiza zokukhangisa zisebenzisa ubuchwepheshe obufana namakhukhi namabhikhoni ewebhu lapho akhangisa kuwebhusayithi yethu, okuthumela ulwazi ngawe kubakhangisi. Lokhu kuyadingeka ukuze ngikubonise izikhangiso ngolimi lwakho. Funda kabanzi ngamasevisi abo kuwebhusayithi yabo.
1. Ungaphuli noma yimiphi imithetho ezweni lakini.
2. Ungawulandi umculo onamalungelo okukopisha ngokungekho emthethweni.
3. Instazoom- Amafayela angase asetshenziselwe izinjongo zomuntu siqu kuphela futhi akufanele adluliselwe noma asatshalaliswe.
Uyavumelana nale migomo nemibandela ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu.
DMCA bese ususa
- Leli ithuluzi elula for Instazoom ukukhulisa izithombe.
- Asibambisi amafayela wesithombe.
- Le webhusayithi ayiwasekeli amakhophi aphangiwe.
- Ngaphambi kokuxhumana nathi, sicela ufunde leli khasi: DMCA.
- Uma ungumnikazi we-copyright yesithombe futhi ufuna ukuvimbela ukuguqulwa kwaso, sicela usithumele i-imeyili.
Sizoyeka ukuguqula lezi zithombe.
Uma unemibuzo noma iziphakamiso mayelana nenkonzo yethu, sicela ungangabazi ukuxhumana nathi: [i-imeyili ivikelwe]